ချီးမွှမ်းခြင်း၊ ယေရှုနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း (ဆရာဦးညွန့်လှ ဓမ္မသီချင်းများ)
ဆရာ Rev. ဦးညွန့်လှ
ခက်ခဲလှသောဘ၀လျှောက်လှမ်းသူများအတွက် ဓမ္မသီချင်းများ အဆက်မပြက်သီဆို၊နားဆင်ခြင်းရန်အတွက် ဆရာဦးညွန့်လှ သီချင်းဖြင့်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။.
ချီးမွှမ်းခြင်းဆိုတာ ဘုရားရှင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ အကြီးအကျယ်ချီးမွှမ်းတဲ့သူကတော့ ဒါဝိပ်မင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဝိပ်ဟာ သိုးကျောင်းသားဘ၀ကတည်းက ချီးမွမ်းလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဝိပ်ဟာ ချီးမွှမ်းခြင်းကြောင့် ချီးမြှောက်ခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ တောထဲမှာ သိုးတွေကျောင်းနေကတည်းက သိုးတွေကိုလုဖို့ ခြင်္သေ့တွေ၊ ၀က်ဝံတွေနဲ့ နဘမ်းလုံးရင်း၊ ဒါဝိပ်ဟာ ချီးမွှမ်းနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ပြသနာတွေနဲ့နေရင်း ဘုရားကိုအစဉ် ချီးမွှမ်းနေတဲ့ ဒါဝိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြသနာတွေကြားမှ ညည်းတွားနေတတ်ကြပါတယ်။ မိတ်ဆွေဟာ ဒီနေ့ အသက်တာကို ချီးမွှမ်းခြင်းနဲ့ အသက်ရှင်နေတာလား၊ ညည်းတွားခြင်းနဲ့ အသက်ရှင်နေတာလား၊ မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာကို ပြန်လည်ဆင်ချင်ပါ။ ယနေ့ချီးမွှမ်းခြင်းအားဖြင့် ဘုရားရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ချီးမွှမ်းခြင်းအားဖြင့် ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကို ခံစားဘို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ချီးမွှမ်းခြင်းအားဖြင့် ဘုရားရှင်ရဲ့ မျက်မှောက်တော်ကို တိုးဝင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာ ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ချီးမွှမ်းခြင်း ၂မျိုးရှိပါတယ်။ ဆုတောင်းခြင်းက လိုချင်တာကို တောင်းဖို့ ဖြစ်ပြီး၊ ချီးမွှမ်းခြင်းကတော့ အလိုတော်ကို ၀န်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေ၊ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် သင်ဟာ အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၊ အသက်ရှင်သောဘုရား၊ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့်ပြည့်ဝသော ဘုရားထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ဖို့ ရနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချီးမွှမ်းခြင်းအားဖြင့် ဘုရားရှင်ထံတိုးဝင်ပြီး အလိုတော်ကို ၀န်ခံ အသက်ရှင်ပါမိတ်ဆွေ။
သခင်ယေရှုဟာ အရာခပ်သိမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုမိတ်ဆွေ နားဆင်သွားသော သီချင်းမှာ ယေရှုဟာ အလင်းဖြစ်တယ်။ ယေရှုဟာ အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ ယေရှုဟာ ခိုလှုံရာဖြစ်တယ်။ ယေရှုဟာ သမ္မာတရားဖြစ်တယ် လို့ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒီသီချင်းမှာ မဖေါ်ပြတဲ့အချက်တွေလည်း များစွာရှိပါသေးတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ခပ်သိမ်းသောအရာများသည် ကိုယ်တော်အထဲက၄င်း၊ ကိုယ်တော်အားဖြင့်၎င်း၊ ကိုယ်တော်အဖို့အလိုငှာ၎င်း၊ ဖြစ်ကြ၏ လို့ ဖေါ်ပြပါတယ်။ မိတ်ဆွေ .. အသက်တာထဲမျာ သခင်ယေရှုရှိရင် အားလုံးပြည့်စုံပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တမလွန်အတွက် စိတ်ချမှုကို ပေးနိုင်သလို၊ အ၀ိဇ္ဖာအမှာင်ဖုံးနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀ိညာဉ်မျက်စိတွေကိုလည်း အလင်းပေးမဲ့ အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ မြေကြီးအသက်တာမှာ တခါတလေ အားကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ သခင်ယေရှုဟာ ကျွန်တော်တို့ခိုလှုံကိုးစားရာဖြစ်ပါတယ်။ လောကပူပန်မှုတွေနဲ့ တွေ့ကြုံစဉ်မှာ သခင်ယေရှုဟာ နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ အရှင်ဖြစ်သလို အကောင်းဆုံးသောမိတ်ဆွေ၊ အကောင်းဆုံးသော တိုင်ပင်ဖက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာ ကျွန်တော်တို့ကို လုံခြုံမှုပေးမဲ့၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမဲ့သူဟာလည်း သခင်ယေရှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေ၊ သခင်ယေရှုနဲ့အတူ အသက်ရှင်နေတာလား၊ ပြန်စဉ်းစားပါ။ သခင်ယေရှုနဲ့ အသက်ရှင်နေတဲ့ သူတွေဟာ ထာဝရအသက်ရပြီ ဆိုတဲ့ စိတ်ချမှုရှိပါတယ်။ သခင်ယေရှုနဲ့ အသက်ရှင်နေတဲ့သူဟာ ဘယ်သူမှ ကြံစီလို့မမှီနိုင်တဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါတယ်။ ၀မ်းမြောက်ခြင်းလည်း ရှိပါတယ်။ လုံခြုံမှုရှိပါတယ်။ စိတ်ချမှုရှိပါတယ်။ သခင်ယေရှုနဲ့ အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေရဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံး၊ ပြည့်စုံပြီဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုနဲ့ အသက်ရှင်ပါ မိတ်ဆွေ။
Link of 14 minutes by U Nyunt Hla (Click Here)
ခရစ်စမတ်ဓမ္မသီချင်း၅ပုဒ် (၁၇ မိနစ်)
ရိုးရာဓမ္မသီချင်း၁၀ပုဒ် (၅၀ မိနစ်)
ဆရာဦးညွန့်လှ၏ သီချင်းများကို ဒေါင်းလုပ်နားဆင်ရန် မြန်မာခရစ်ယာန်လူငယ်များ အင်တာနက်လင့်
၀မ်းမြောက်ခြင်းတွေစုံလင်မယ် - ဆရာဦးညွန့်လှ
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ - ဆရာဦးညွန့်လှ
အမွေခံသားသမီးဖြစ်ရမယ် - ဆရာဦးညွန့်လှ။
ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရင်ပလ္လင်တော်ကိုစွန့်၍၊ Thou didst leave Thy Throne 104